I-Semalt: Ukubaluleka kokuhlunga Out Traffic Admin Kusuka ku-Google Analytics
Uke wahlola iGoogle Analytics futhi waphawula ukuthi ezinye izinto ezingakaqiniseki zenzeka? Kwenzekani kithi sonke, ngakho awuyena into entsha kule nto. Kunezikhathi lapho sisa izinto ezithile kuwebhusayithi yethu futhi sishintsha umklamo noma isakhiwo, kepha imiphumela ayilindelekile. Konke lokhu kungathinta ukuvakashelwa kwakho kanye nekhwalithi yakho ye-website ye-traffic . Ezimweni ezinjalo, kufanele uhlunge umzila wokuphatha kusuka ku-Google Analytics yakho, futhi lokhu kungenziwa uma usebenzisa ama-plug-ins ahlukahlukene we-WordPress - best temp monitor. Futhi uma ungasebenzisi i-plugin, kuzodingeka wenze lokho ngesandla ngesandla. I-Google Analytics ikuvumela ukuba uhlunge i-traffic uma ungafaki ikheli lakho le-IP noma ungabandakanyi ithrafikhi ngokuqukethwe kwamakhukhi.
Ngokuvamile kunenkolelo yokuthi indlela yokuqala ilula kakhulu futhi iphelele kunendlela yesibili. U-Lisa Mitchell, iMenenja Yokuphumelela Kwamakhasimende Semalt , uthi uma unamakheli e-IP avuselelwe noma uma usebenzisa i-laptop noma idivaysi yesitolo sekhofi, kufanele uyeke ukuvakashelwa kwakho kubalwa ku-Google Analytics. Zombili lezi zindlela zinezinzuzo nezinzuzo zazo futhi zingahle zikhethwe ngokuya ngezidingo zakho.
Hlanganisa ikheli lakho le-IP
Le ndlela ikuvumela ukusetha i-Google Analytics ngendlela engcono. Lokho kuzokusiza ukuba uthuthukise ikhwalithi yethrafikhi yakho, futhi ungayeka ukuthola imibono kusuka kumakheli we-IP noma ububanzi be-IP. Noma kunjalo, lokhu kungenziwa kuphela uma usebenzisa i-laptop futhi ulungele ukulungisa izilungiselelo kusuka kudivayisi efanayo. Futhi uma ushiya ihhovisi noma ungaphandle kwendlu yakho, le ndlela ayikwazi ukunikeza inzuzo. Uma kunjalo, kufanele uzame ukusebenzisa indlela yesibili. Ukuze ungabandakanyi ithrafikhi nge-IP ethize, kufanele udale izihlungi zenkambiso ezingakwazi ukuhlaziya ikhwalithi ye-traffic yakho ngendlela engcono. Ngena ku-akhawunti yakho ye-Google Analytics bese uchofoze inketho yezilungiselelo ekhoneni eliphezulu ngakwesokudla. Khona-ke kufanele ucindezele ukhetho olusha lokuhlunga bese wengeza ulwazi olunjengegama lokuhlunga, uhlobo lokuhlunga, ikheli le-IP, nabanye.
Hlanganisa ukuhamba nge-Cookie Content